Great turnout for Bristol's first vigil - The Zimbabwean
Great turnout for Bristol’s first vigil
BRISTOL - The turnout at Bristol's first vigil was spectacular and Gloucester Road was throbbing l
ast Saturday afternoon as the group startled passers-by with its vibrant spirit, report coordinators Jude Edwards, Rosemary Baragwanath and Catherine Feeny.
Simba Mugudza of SimbaArts and his troop of drummers and dancers joined Red Notes, a Bristol-based choir who specialise in Southern African songs, creating a wonderful fusion of harmonic energy. Several people were dressed in traditional attire -perhaps not suitable for an English early spring – but it attracted some Zimbabwean passers-by.
Signatures were collected for a petition to be sent to the UN Security Council urging pressure on Zimbabwe to put an end to human rights abuses.
‘Make Mugabe History’ wristbands, provided by Sue Toft and her daughter Francesca, were sold, along with home-made flapjacks and banana cake.
It was emphasised that the holding of such vigils sends an important message to people at home that although such a meeting would be considered treason in Zimbabwe, in the Diaspora Zimbabweans do still have a voice, and are working to gather support amongst local communities.
The next Bristol Vigil is scheduled for April 29 and thereafter on the last Saturday of every month until free and fair elections take place in Zimbabwe.